”Roberto Gagliardini wuxuu tiir-dhexaad u noqon doonaa xulka Talyaaniga” – De Rossi – Gool FM
”Roberto Gagliardini wuxuu tiir-dhexaad u noqon doonaa xulka Talyaaniga” – De Rossi
Raage March 27, 2017
(Coverciano) 27 Maarso 2017 – Daniele De Rossi ayaa rumaysan in Roberto Gagliardini uu noqon karo ninka dhaxli doona booskiisa Azzurri isagoo laacibkan ku tilmaamay ”tiirka” xulka Talyaaniga.
Gagliardini ayaa si la yaab leh fasalkan u qarxey, isagoo Atalanta oo uu sanad kahor amaah uga maqnaa safka hore ka noqday, kaddibna ay lacag badan kusoo qaadatay Inter Milan, isagoo haatanna ka mid ah xulka Talyaaniga ee habeen dambe wahagaya Holland, iminkana De Rossi ayaa laacibkan ku tilmaamay midka u haraya booskiisa Azzurri.
“Haddii aan ka fikiro laacibiin la i barbar dhigi karo sanadaha soo aaddan, waxaa jira Gagliardini, kaasoo aan rumaysnahay inuu noqon dooni tiirka xulkan,” ayuu raacaha Roma ka sheegay shir jaraa’id kahor kulanka ay habeen dambe Netherlands la ciyaarayaan.
“Waxaan rajaynayaa inaanan illaacaysan, balse waxaan markii iigu horreeysey ku arkay kulan dhexmaray Atalanta-Napoli waxaana dareemay inuu ragga kale ka duwan yahay, waxaan rajaynayaa inuu booskiisa ka xiran doono Talyaaniga. Wuxuu runtii u muuqdaa nin adag.” ayuu raaciyay De Rossi.
SAWIRRO: Bal aan ku dhex gelino baytka qaaliga ah ee Paul Pogba!
Neymar: Brazil waxa ay soo jiidatay Lionel Messi